Igama Product: 4-inxalenye imifuno grinder
Isixhobo: IAluminiyam T6061
Ukugqiba umphezulu: Umbala we-Anodizing
I-4-part herb grinder, eyenziwe ngeAluminiyam T-6061, esisixhobo esilijikelezileyo esineenxalenye ezi-4 ezahlulayo nezinamazinyo okanye izikhonkwane ezilungelelaniswe ngendlela yokuba xa kuguqulwa inxenye ephezulu, izinto zangaphakathi zenziwe zagawulwa. Inxalenye yesi-3 iqokeleleke enye egumbini elingaphantsi kwaye icoca ikief. Inxalenye yesi-4 iqokelelwe kief ..
-Umsebenzi onzima ulawula ngaphezulu iminyaka yokusetyenziswa.
-I-500 micron screen filters / ezantsi kwigumbi elisezantsi (kubandakanya iscatula esincinci ukuqokelela eyakho).
-Sila ngokulula iziqholo / imifuno / ihlumelo ngaphandle kokushiya iziqwengana ezikhulu-Nokuba kukwimifuno emitsha / emanzi.
Isiciko esomeleleyo semagnethi sihlala siqinile ngoomazibuthe abanamandla be-neodymium, ukuze usebenzise le grinder ekugcineni imifuno.
-Ukugqwesa umpu we-Gun Metal kukunganyangeki kwaye kuyanceda UKUGCINA IXESHA NEMALI-Sebenzisa kancinci kwiziphumo ezifanayo.
Egqithileyo Isikhuseli sokhula esineLogo yesiqhelo
Okulandelayo: aluminium imifuno grinder
Icuba lokusila icuba
Iintsholongwane zeCuba leHerbal
I-logo ye-logo ye-alfabhethi yesitshisi esine-HYCZ90003
uhlaza ukhula grinder